किसानको माग अनुसार बढ्ने भयाे दूधको मूल्य, प्रतिलिटर कति ? - ramechhapkhabar.com
किसानको माग अनुसार बढ्ने भयाे दूधको मूल्य, प्रतिलिटर कति ?
सरकारले दुधको मूल्य निर्धारणका लागि प्रकृया थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक समिति बनाएर राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गरिसकेको छ । अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भैरहेको बोर्डका प्रमुख राजेन्द्र यादवले बताउनुभयो ।
आइतबारसम्ममा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी छ । मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरी दुग्धको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । दाना, चोकरलगायत दुध उत्पादनका बस्तुको मूल्य बढेकाले दूधको मूल्य बढाउन किसान र उद्योगबाट प्रस्ताव आएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले प्रतिलिटरमा ८ देखि १० रुपैयाँसम्म बढाउनेगरी गृहकार्य गरिरहेको छ । यसअघि २०७६ साल भदौमा दूधको मूल्य ६ रुपैयाँले बढेर प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ तय भएको थियो । त्यसयता दुधको मूल्य वृद्धि भएको छैन । यसपालि कच्चा दुधकै मूल्य निर्धारण हुने र त्यसका आधारमा प्रशोधित दुधको अर्को मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी छ ।
वाग्मती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले दश रुपैयाँ मूल्य बढाउन कृषि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष बसुन्धरा हुमागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले मूल्य बढाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अबको १५ दिनभित्र दुधको मूल्यमा समायोजन नभएर वाग्मती प्रदेशले दुधको मूल्य समायोजन गर्ने अध्यक्ष हुमागाईंले बताउनुभयो ।